Ogaden News Agency (ONA) – TV-ga Royal oo xalay laga daawaday xaflad ay jaaliyadda Al-Xasa ku xusayeen sanadguurad 28aad
TV-ga Royal oo xalay laga daawaday xaflad ay jaaliyadda Al-Xasa ku xusayeen sanadguurad 28aad
Posted by ONA Admin	/ August 21, 2012
Waxaa dunida dacaladeeda laga daawaday xalay xaflad si fiican loo soo agaasimay oo jaaliyadda Al-Xassa ee Sacuudi Carabiya ay ku xusayeen sanadguuradii 28aad ee asaaskii Jabhadda Wadaniga Xoreynya Ogadenya. Xafladdan ayaa laga daawaday TV-ga ay dadweynaha Somaliyeed sida aadka ula socdaan ee Royal.
Warbixinada hordhaca ah ee meela badan aan ka helayno ayaa sheegaya inay xafladani ahayd mid si xirfadaysan oo heersare ah loo soo diyaariyay ayaan laga filaynin inay qabtaan jaaliyadaha ku dhaqan dalalka Carabta gaar ahaan Khaliijka oo ah dalal muxaafad ah. Hasa ahaatee jaaliyadda Al-Xasa oo ah jaaliyad firfircoon oo halganka qayb libaax kaga jirta ayaa hirgalisay isla marahaantaana ku guulaysatay inay caalamka ugu soo bandhigto TV-ga Royal.
Xafladdan oo laga daawan doono cajaladaha marka la soo dhamaystiro ayay dadweynihii daawaday ku tilmaameen inay ahayd xaflad u qalanta munaasabadda ururka, halkaasoo khudbado looga jeediyay dadweynihii ka soo qabgalay.
Warbixina faahfaahsan iyo sawira dheeraad ah ayaan gadaal ka soo dayn doonaa.
aad iyo aad ayaan idiinku faraxnay walaa layaal reer carbeed waxaan ujeedaa jaaliyada ku dhaqan wadamada carabta guul baan idiin rajaynayaa iyo gobanimo ogaadeeniyaa xorowday ogaadeeniyaa xorowday waxaad ku bishaaraysataan in aynu gaadhnay meel aan la hor istaagi karin xoriyadeena aynu sii toban laabno dadaalkeena .waxaan ilaahay ugabaryiyaa kuwa habowsan in uu soo hanuuniyo hadii ay hanuuniwaayaana iyaga ayaa yaqaana meesha ay aadi doonaan